उर्लावारी / मोरङको मिक्लाजुङ – ९ मा क्रसर उध्योग र एग्रो टुरिजम फार्म एकै स्थानमा एकसाथ सञ्चालनमा आउने भएपछि दुई कम्पनीका संचालकहरुबीच विवाद चुलिएको छ ।
मिक्लाजुङ – ९ को अबिरलचोक पश्चिमपट्टि करिब ६ बिगाहा जग्गामा एग्रो टुरिजमको अवधारणा अनुरुप अबिरल एग्रो फार्मको संरचना निर्माण भईरहेको छ । तर सोही फार्मसँग जोडिएर देबिथान मिनरल्स उद्योग नामको क्रसर उध्योगको पनि निर्माण हुन थालेपछि दुई उ्रध्योगका बिचमा विवाद चुलिएको हो ।
क्रसर उध्योगको ध्वनि र धुलाले कृषि फार्मसहितको रिसोर्ट प्रभावित हुने भन्दै एग्रो फार्मका संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उता आफुहरुले एक वर्ष अघिनै सबै मापदण्ड पुरा गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर क्रसर उद्योग संचालनमा ल्याएको क्रसर संचालक बबी राईले दावी गरेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग लगायतका निकायबाट अनुमति लिई वातावरणीय मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट समेत तयार पारी काम भईरहेका बेला नियोजित रुपमा क्रसर बन्द गर्न कृषि फार्मका संचालकहरु लगि परेको राईले आरोप समेत लगाएका छन् ।
आफुले उध्योग दर्ता गर्दा वडा बाट सर्जिमीन गराई चार किल्ला साँध सधियार राखी सहमतीमा उधोग स्थापना गरेको उनले जिकीर गरेका छन् । आफु सधीयार भएपनी उधोग स्थापना पुर्व चार कील्ला सर्जिवनमा सधियार लाई नसोधीनु र कृषी उधोग दर्ता भएको भोली पल्ट नै क्रसर दर्ता खारेज गर्ने माग गर्नु नियोजित खेल भएको क्रसर उध्योगका संचालक राईको भनाई छ ।
लाखौ रकम खर्चिएर संरचना तयार हुँदै गर्दा कुनै सरसल्लाह नगरी एकाएक क्रसर सञ्चालन रोक्ने उद्धेश्य आफुहरुलाई मान्य नभएको उनले दावी गरेका छन् । २०७४ चैतमा नै क्रसर उध्योग सञ्चालनको अनुमति लिइएको भएपनि कृषि फार्मले गत मंसिर १२ गते मात्र दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेको उनले जानकारी गराएका छन् ।
कृषि फार्मका संचालकले अबिरल चोकको बाटो, कल्भट निर्माण र विधुत विस्तार भन्दै आफुलाई हस्ताक्षर गराएको तर क्रसरको बिषयमा कुनै कुरा नउठाएको स्थानीय धनमाया राईले बताएकी छनु ।
अबिरल कृषि फार्मका संचालक प्रेम भण्डारीले भने स्वीकृति नै ल्याएपनि मानव वस्तीको विचमा क्रसर उद्योग संचालन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । समग्र मिक्लाजुङको पर्यटनलाई टेवा पुर्याउने हेतुले बृहत कृषि फार्म र रिसोर्ट संचालनमा ल्याउन लागेको उनले बताएका छन् ।
चालु पुँजी एक करोड र अधिकृत पुँजी दुई करोडबाट एग्रो फार्मको संरचना तयार हुँदै गरेको छ । माछा पालनका लागि करिब ३५ लाख खर्चिएर तीन वटा पोखरी समेत बनाईसकेको अवस्थामा क्रसर संचालनमा आए आफुहरुको एग्रो टुरिजमको अवधारणा धरासायी हुने कृषि फार्मका संचालक गोमा नेपाल बताउँछिन् ।
यसैबीच क्रसर र कृषि फार्मका संचालकबीच विवाद हुँदै गर्दा प्रदेश नंं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कृषि फार्मको शनिवारै स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
सिमाना बिबादकै कारण समस्या
अर्को आस्चर्यजनक कुरा के छ भने गएको चैत्रमा क्रसर उधोग संचालनको लागि मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. ९ ले क्रसर संचालनका लागि अनुमती दिई २०७४ चैत्र २५ गते घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय बिराटनगरमा दर्ता छ ।
उता क्रसर क्रसर उधोग भन्दा उत्तर तर्फ संचालन हुन लागेको कृषी फार्ममा लाई भने उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. १ ले सिफारीस गरेको छ । उर्लाबारी नगरपालीका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको बिचमा देखीएको सिमान बिबादका कारण पनि सो स्थान बिगत लामो समय देखी बिबादमा पर्दै आएको छ ।